Ny fiarahantsika mientana no antoka hampiroborobo ny boky Malagasy – Blaogin'i Voniary
Ny fiarahantsika mientana no antoka hampiroborobo ny boky Malagasy
Tsy raharahan’ny mpanoratra samirery na ny mpanonta sy ny edisiona fotsiny ny fampivelarana ireo asa soratra Malagasy. Misy anjara birikin’ny mpanao gazety, ny mpahay serasera, ny mpandraharaha ary indrindra ireoolon-tsotra, mpamaky ihany koa ao. Nafotaka tokoa ny fifanakalozan-kevitra miompana amin’ny boky tao anatin’ny « Cercle littéraire » izay notanterahin’ny fikambanana « Opération Bokiko » ny sabotsy 15 desambra lasa teo tao amin’ny IKM Antsahavola. Toy izao ary ny andinindininymahakasika izany.
Ny olana eo amin’ny fanjifana boky Malagasy
Misedra olana hatrany ny mpanoratra rehefa mamoaka boky eto Madagasikara araka ny nambaran’i Michèle RAKOTOSON, mpanoratra andrarezina sy mpandrindra ny fikambanana « Opération Bokiko ». Ny vidiny fotsiny dia efa mampihemotra ny olona indraindray satria ambany dia ambany ny fahefa-mividin-dramalagasy. Nanampy koa ireo nandray fitenenana fa ny kolontsaina no vato goavana misakana ny Malagasy tsy hanjifa ny asa soratra Malagasy. Efa voataiza tao anatin’ny kolontsaina vahiny isika, ny frantsay sy ny anglisy indrindra indrindra. Hany ka, ny hany boky malagasy mba nolalovan’ny mason’ny besinimaro dia ireo noterena nanaovany famintinana tany anaty fandaharam-pianarana. An’iza ary ny tsiny ? An’ny mpanjanaka fahiny, nanimbazimba ny toe-tsaintsika ve sa antsika ankehitriny,olon-dehibe, tanora, ankizy tsy mba mahay manome lanja ny an’ny tena manoloanany an’ny hafa ?
Mahay manome lanja ny asa soratra Malagasy ve isika?
Antontanisa mikasika ny varotra boky
Andao mba iresaka antontanisa kely isika ! Ilay boky Aloalo nosoratan’i Rija Al-Jonah, izay efa hananika ny fahavalo taona nivoahany izao, dia vao eo amin’ny 150 isa eo no lafo hatramin’izao. Tao anatin’izay taona marobe izay izany dia olona 150 no mba nahafoy vola nanjifana io asa soratraio, izany hoe olona 19 eo ho eo ao anatin’ny herin-taona. Toe-javatra mampalahelo io ary maro no toy izany! Misy mahavelom-panantenana ihany anefa ny sasany toy nyan’ilay boky Taratasin’i Zaman’i Jao nosoratan’i Momo Jaomanonga izay nahalafoeo amin’ny boky 500 isa eo ho eo tao anatin’ny telo volana.
Hivoaka kely isika, hampitaha ny eto amintsika amin’ny tontolon’ny fivarotam-boky any ivelany. Any amerika dia misy ilay lisitra avoakan’ny NewYork Times isan-taona mitanisa ireo boky be mpividy indrindra « New YorkTimes Best Sellers lists ». Izay mahalafo boky mihoatra ny 5000 na 10000 aoanatin’iny herinandro no manana anjara hiditra ao anatin’io lisitra io. Ahitanasokajy 6 izy io ary misy boky 20 eo ho eo isakin’ny sokajy. Ny nahazo nyvoalohany tamin’ity volana Desambra 2018 ity, sokajy tantaram-piainana, diailay boky « Becoming » nosoratan’i Michelle Obama, nahalafo 725000 isa tamin’ny andro namoahana azy ny 13 Novambra. Alaivo sary an-tsaina amin’izanyry Malagasy havako ny firitaritan’ny fanjifana boky any an-kafa, aiza ho aizaamin’izany ny eto amintsika ?
Ny ho avin’ny boky Malagasy
Tsy milavo lefona anefa ireo tompon’andraikitra voalohany eoamin’ny tontolon’ny boky manoloana ny zava-misy eto amintsika. Izany indrindrano antom-pisian’ny fikambanana « Opération Bokiko » izay miezaka mitaiza mpanoratra, mamoaka boky ary manapariaka ireny boky ireny amin’ny vidinytakatry ny sarambabembahoaka. Navoitr’i Michèle Rakotoson indrindra fa asavadi-drano ny fampiroboroboana ny boky ka tsy vita raha tsy ifanakonana. « Ao anatin’ny fanorenana tambazotran’ny boky isika izao : eo izahay mpanoratra,ny mpanonta boky sy ny edisiona. Tsy vitanay samirery anefa io fa mila nympanao gazety hampita sy hiresaka momba ireny boky vaovao sy hetsika manodidinaazy ireny, mila mpahay serasera mba hiketrika izay hetsika mahomby mbahampiroboroboana ny vaky boky sy fanjifana boky, mila mpandraharaha mahaymitady mitady vola sy mahafantatra izay tadiavin’ny olona, sy ny maro hafa ».
Hetsika notanterahin’ny Opération Bokiko
Raha ny amin’ny malagasy tsy liana amin’ny famakiana boky Malagasy indray no resahina dia mila ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay. Marina fa boky teny frantsay sy teny anglisy no nahazatra antsika fa mila ezaka kely avy amintsika io. Hoy Mose Njo hoe « na mamaky teny gasy 15 minitraisan’andro aza ianao dia efa mitombo ny fahalalanao momba ny kolontsainamalagasy sy ny fahaizanao voambolana malagasy ».
Koa alao ery ary ry Malagasy havako ! Miankina amintsika tsirairay ihany ny hampandroso na tsia ny asa soratra Malagasy. Ity Blaogin’i Voniary ity moa no anjara birikiko mba hamakianao teny Malagasy farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro. Mazotoa ary e !
Gasy fiaina, Resadresaka
boky Malagasy, IKM Antsahavola, môssieur njô, Michèle Rakotoson, Momo Jaomanonga, mpanoratra malagasy, Opération Bokiko, varotra boky
4 commentaires sur “Ny fiarahantsika mientana no antoka hampiroborobo ny boky Malagasy”
BONAZAFY Olodier dit :
3 janvier 2019 à 1 h 14 min
Tiako be araiky ty.. Mankasitraka. Mböla any amin’ny Raharimanana jean luc..ny manuscrit tsika » salövaña complet « ….mbola mijery ny hanaovany azy.. Misaotra Arabainy tratran’ny taona eee
Marina tokoa fa zava-dehibe ny tenin-drazana momban’ny fampitana ny kolotsaina malagasy. Indrisy anefa fa tsy tena havanana ny rehetra ka voatery mampiasa teny vahiny tsindraidray.
Anisan’izany ohatra ny boky makasika ny BARA sy ny tontolo ihainany indrindra momban’ny toe-pahasalamana.
Azon’ny rehetra atao ny mamaky ity boky tiy amin’ny teny frantsay :
Mankasitraka amin’ny fizarana e!
24 août 2019 à 9 h 00 min
mankasitraka ,fa agnisany lohahevitry nanaitry zah indrindra tamin’ity taona ity ,miandry tohiny oooo